Myanmar Outbound Tour Packages BALI - JOGJAKARTA, Indonesia Tour 2019 - Myanmar Interlink Services Co.,Ltd.
Myanmar Outbound Tour Packages BALI - JOGJAKARTA, Indonesia Tour 2019
Tour Price: Indonesia (Bali) Regular Tour Package (4 Days3Nights) for 8 Pax group = USD255 per pax (Price valid until 20th December 2019; OPTION -----JOGJAKARTA. Bali- JOGJAKARTA Indonesia Tour package (5 D4N) for 8 pax group = USD365 per pax Tour Type: MIS/OT/01-LISA/19/in(Outbound) Tour Duration:4Days3Nights (Option)5Days4Nights
Visit Pandawa Beach also known as “Hidden Beach” which has become one of the most popular tourist destination
Enjoy the Barong Dance,atraditional dance of Balinese people which isastory telling dance, narrating the fight between good and evil.
Travel through the Kintamani mountain region
Visit Ubud, the artistic hub of Bali
Marvel at sacred Hindu landmarks like Taman Ayun Temple and Ulun Danu Bratan Temple
Absorb the verdant beauty of the Jatiluwih Rice Terrace
Watch the sunset and enjoy dinner at the magical Tanah Lot Temple
Indonesia (Bali) Regular Tour (4 Days3Nights)
DAY 01: Departure Yangon –BALI ARRIVAL & PANDAWA BEACH – GWK BALINESE DANCE
DAY 02: BARONG DANCE – KINTAMANI VOLCANO & UBUD TOUR
DAY 03: BEDUGUL–TANAH LOT SUNSET TOUR
DAY 04: TRANSFER OUT
OPTION —–JOGJAKARTA. Bali- JOGJAKARTA Indonesia Tour (5 D4N)
Visit Prambanan TempleaUNESCO World Heritage Site
Visit Kraton The Sultans palace, Taman Sari Water Castle, Traditional Batik Home industry, Kotagede silver village
Visit Borobudur Buddhist Temple
DAY 04: BALI – JOGJAKARTA
DAY 05: JOGJAKARTA DEPARTURE
 Hotel accommodation at the lowest category room included daily breakfast
 Transportation by Private Air Conditioned Car
 Tour as per itinerary included entrances ticket and parking fees
 Meals as stated on itinerary (B-Breakfast, L-Lunch, D-Dinner)
 Daily mineral water
 English Tour Guide
 Tips for driver &tour guide suggestion IDR 50K <5pax&IDR 30K>5pax(quoted per pax per day)
 International/Domestic Air-ticket or Fast Boat/Ferry Ship
 Other personal expenses not specified on itinerary
 Valid Immediately until 20 December 2019 on Normal Season Only.
High Season Surcharge on certain period to be advised later.
 Rates quoted net per person minimum2adults traveling together
 Child policy: child <10 years without Extra Bed pay 50%, with Extra Bed pay 75%
 Subject to availability upon your booking
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂၀)ရက်နေ.အထိ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဟိုတယ်၌အိပ်ခန်းတစ်ခန်းကိုနှစ်ဦးမျှနေထိုင်သည့်စံနစ်ဖြင့် နံနက်စာ အပါအ၀င်ညအိပ်တည်းခို နိုင်ခြင်း
Private Air Conditioned Car မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်ပို.ဆောင်ပေးခြင်း
ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားသော နံနက်စာ၊ နေ.လည်စာနှင့် ညစာများ
ခရီးစရိတ်တွင် အောက်ပါများ မပါဝင်ပါ။
ဧည့်လမ်းညွှန်နှင့်ယာဉ်မောင်းအား ပေးဆောင်ရမည့် Tips (ပုံမှန်အားဖြင့်ခရီးသည် တစ်ဦးလျှင် တစ်ရက်ကို IDR ၅၀ နှုန်း)
ခရီးစဉ်တွင်ဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသော အခြားကိုယ်ပိုင် အသုံးစရိတ်အားလုံး
OPTION —–YOGYAKARTA. Bali- YOGYAKARTA Indonesia Tour (5 D4N)
1. AC Transportation
3. 3N stay at hotel in Bali + 1N stay at hotel in Jogjakarta ( twn / Trpl share )
4. Tour as per program
5. Meals as per program
6. Mineral water on Tour
1. Air ticket and airport tax
3. Extra Tour
DAY 01: BALI ARRIVAL & PANDAWA BEACH – GWK BALINESE DANCE (D)
Arrival at Ngurah Rai International Airport, Bali. Meet and greet by our representative. Your leisure will be start by HALF DAY tour to Pandawa Beach & GWK Cultural Park while watching Balinese Dance Collaboration followed by dinner. Check-in hotel and free program.
Ngurah Rai International Airport တွင် ဧည့်လမ်း ညွှန်မှ ကြိုဆိုပါမည်။ ထိုနောက်နေ.ဝက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို Padawa Beach နှင့် GWK Cultural Park သို.သွားရောက်လည်ပတ်ပြီးBalinese Dance Collaboration ကိုကြည့်ရှုခံစားပါမည်။ပြီးလျှင် ညစာသုံးဆောင်၍ ဟိုတယ်တွင်Check-inလုပ်ပြီးအနား ယူ ပါမည်။
DAY 02: BARONG DANCE – KINTAMANI VOLCANO & UBUD TOUR (B/L/D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာစားပြီးBatubulanသို.ကားဖြင့် သွားရောက်၍ Barong Dance Performanceကြည့်ရှု
ပါမည်။ ထို့နောက်Batubulan Batik center, Celuk & Mas Center များသို.သွား ရောက်၍ ပါတိတ် ရွှေ၊ ငွေ၊ သစ်သား ပန်းပု ရုပ်ထုများကြည့်ရှု ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး Baliကျွန်း၏အထင်ကရရေပူစမ်းတစ်ခု ဖြစ်သောTampak Siring နှင့် Bali Coffee (Luwak coffee) စိုက်ခင်းများကိုသွားရောက်လေ့လာကြည့်ရှု ပါမည်။
Kintamani ၌ ရှိသောရေကန်နှင့် ၊ Batur တောင်၏ သာယာလှပသောရှူခင်းများကို ခံစားရင်း နေ.လည်စာ သုံးဆောင်ပါမည်။
နေ.ခင်းပိုင်းတွင်UBUDသို. ပြန်လာပြီးTegalalang လှေကားထစ် စပါးစိုက်ခင်းများကိုလေ့လာပါမည်။ Jimbaran Beach ၌ BBQ Seafood Menu ဖြင့် ညစာကိုတည်ခင်း ဧည့်ခံကျွေးမွေးပါမည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ပြန်ကာစိတ်ကြိုက်အနားယူ ပါမည်။
DAY 03: BEDUGUL–TANAH LOT SUNSET TOUR (B/L/D)
Breakfast at hotel. Full day tour visit to Taman Ayun Temple, the second largest temple in Bali, Candi Kuning Fruit & Vegetable Traditional Market and lunch at local restaurant at Bedugul Cool Mountain Area. En route visit to Ulundanu the lakeside temple, Alas Kedaton monkey forest. In the afternoon, drive to Tanah Lot, the best place to see sunset.Dinner at Local Restaurant.
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး တနေ.ကုန် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာလေ့လာရေးခရီးစဉ်ကို Bali တွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သော Taman Ayun ဘုရား ကျောင်းသို့သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်
ရိုးရာဈေးဖြစ်သော Candi Kuning အသီးအရွက်ဈေး သို.လည်ပတ်ပြီး အေးမြသော Bedugul တောင် ဝန်းကျင်၏ Restaurantတွင်နေ.လယ်စာ သုံးဆောင် ပါမည်။ အသွားလမ်းခရီး၌ရေလယ်တွင်တည်ထားသော Ulundanက ဘုရားကျောင်းနှင့် Alas Kedaton monkey Forest သို. သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ Bali ကျွန်း၏ ညနေခင်း နေဝင်ဆည်းဆာ အလှကို ကြည့်ရှုရန် Tanah Lot သို့ ခရီးဆက်ပါမည်။
ညနေစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်သို.ပြန်ကာအနားယူ ပါမည်။
DAY 04: TRANSFER OUT (B)
Breakfast at the hotel.Free program until normal c/o at 12.00.Pick-up 3hrs before departure flight & transfer to the airport for your next flight.
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ပုံမှန် Check out
လုပ်ပါမည်။ လေယာဉ်ထွက်ချိန် မတိုင်မီ ၃ နာရီအလိုတွင်
လေဆိပ်သို. လိုက်လံပို.ဆောင် ပေးပါမည်။
DAY 04: BALI - YOGYAKARTA (B,L,D)
Bali- Jogjakarta Indonesia Tour (5 D4N)
Breakfast at the hotel. Transfer to Ngurah Rai Intl airport for flight to Jogjakarta. Upon your arrival at Jogjakarta airport, meet and greet with your guide, direct visit to Prambanan Temple,atemple complex of old Mataram Hindu Kingdom (900AD). Follow by visit Kraton The Sultans palce, Taman Sari Water Castle, Traditional Batik Home industry, Kotagede silver village, Borobudur Temple (UNESCO HERITAGE)-one of the world’ s seven wonders. The monument is uniquely for medasa “mandala” made of stones (800AD) .. Lunch and dinner at local restaurant. Check in hotel and overnight at Jogjakarta
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး JOGJAKARTA မြို့သို. လေယာဉ်စီးရန် NgurahRai Intl airport သို. ပို.ဆောင်ပေးမည်။ JOGJAKARTA လေဆိပ်သို. ဆိုက်ရောက်သည့်အခါအတွေ.အကြုံရှိ အင်္ဂလိပ် စကားပြောဧည့်လမ်းညွှန်မှ ကြိုဆို၍ ၉၀၀ AD ခန်. old Mataram Hindu Kingdom ၌ တည်ထားခဲ့သော Prambanan Temple ဘုရားကျောင်းသို. လေ့လာရန် တိုက်ရိုက် ပို.ဆောင် ပေးမည်။ ပြီးနောက် Kraton The Sultans palace, Taman Sari Water Castle သို့ သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ ထို.အပြင် ရိုးရာပါတိတ် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနှင့် Kotagede silver village ရှိ ငွေထည်လက်မှုလုပ်ငန်း စက်ရုံများကို သွားရောက် လေ့လာပါမည်။ UNESCO HERITAGE မှ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ် ထားသော ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ရာ ခုနှစ်ခုအနက် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ၈၀၀AD ခန့်က ကျောက်တုံးများဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ သည့် BOROBUDUR Buddhist Temple သို. သွားရောက်လေ့လာနိုင်ရန် ပို.ဆောင် ပေးပါမည်။ လမ်းခရီးမှာ နေ့လယ်စာနှင့်ညစာကို စားသောက်ဆိုင်၌ သုံးဆောင်ပြီးနောက် JOGJAKARTA မြို့ရှိ ဟိုတယ်သို့ ပြန်လည်အနားယူပါမည်။
Day 05 : JOGJAKARTA DEPARTURE ( B )
Breakfast at hotel. Free program until time to transfer to Jogjakarta airport for your next destination.
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသု့းဆောင်ပါမည်။ ရန်ကုန်မြို.သို. ပြန်လည်ထွက်ခွာရန်Jogjakarta လေဆိပ်သို. ပို.ဆောင် ပေးမည့်အချိန်မတိုင်မီ ကိုယ်ပိုင်အချိန် ဖြစ်ပါသည်။
Hotel (4 Star) B Hotel Bali Bliss Surfer
No: of Pax Price per pax Price per pax
2 USD 325 USD 360
3 USD 290 USD 305
5 USD 270 USD 290
8 USD 255 USD 270
11 USD 240 USD 255
15 USD 225 USD 245
Sgl Supp USD 65 USD 75
Hotel (4 Star) Eden Kuta + The 101
No: of Pax2468 10 15
Price per pax(USD) 460 390 370 365 360 355
Sgl Supp USD 100